Ireo manodidina an-dRajoelina : Mpanao hosoka sy vola maloto -
AccueilRaharaham-pirenenaIreo manodidina an-dRajoelina : Mpanao hosoka sy vola maloto
08/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nampangaina ho mpilaza lainga hatrany ny gazety Triatra raha nitatitra ny vaovao mikasika an’i Mamy Ravatomanga. Akory anefa ny hagagan’ny maro rehefa nivoaka tamin’ireo hainoamanjery vahiny, ny raharaham-pitsarana miandry ity mpamatsy vola ny MAPAR ity, izay nilaza ny fisian’ny famotsiam-bola maloto, fanodinkodinam-bolam-panjakana, ary harena tsy fanta-pototra.
Olona manan-draharaha eny amin’ny Fitsarana avokoa ny ankamaroan’ireo manodidina an’i Andry Rajoelina: ny sasany enjehin’ny Fitsarana PNF (Parquet National Financier) noho ny resaka famotsiam-bola maloto, halatra sy fanodinkodinam-bolam-panjakana, voaresaka hatramin’ny trafika-na “bois de rose”, harena tsy fanta-piaviana izay notaterin’ireo hainoamanjery vahiny. Ny hafa kosa nomelohin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany miady amin’ny Kolikoly noho ny fampiasana diploma sandoka nikasana hidirana tao amin’ny ENAM sy ny CEDS, eo ihany koa ireo manan-draharaha mikasika ny tsy fandoavan-ketra, sns.
Na teratany malagasy izany, na teratany vahiny manodidina ity lehiben’ny fanonganam-panjakana ity dia olona manana raharaha maloto teny amin’ny Fitsarana avokoa. Ny volana faha-9 Mey lasa teo dia nivoaka tao amin’ny gazety L’Express tany Frantsa ny lahatsoratra nitondra ny lohateny hoe: “Quand l’argent malgache finit à Levallois”, izay nitatitra ny raharaha famotsiam-bola, halatra sy fanodinkodinam-bolam-panjakana, “bois de rose” ary harena tsy fanta-piaviana an’i Mamy Ravatomanga. Mbola niresaka ity raharaha ity ihany koa ny LOI (Lettre de l’Océan Indien) ny faha-01 Mey lasa teo, tamin’ny lohateny vaventy hoe « Assaut judiciaire contre Ravatomanga, parrain de l’opposition » ary farany teo ny raharaha teny amin’ny Bianco, fampiasana hosoka nikasana hidirana tao amin’ny CEDS sy ENAM, nanamelohan’ny Fitsarana an’i Roberto Tinoka sazy mihantona herintaona an-tranomaizina.
Toraka izany koa anefa ireo vahiny niaraka nanao ilay « diniky ny mpanjanaka » tany Frantsa tamin’i Andry Rajoelina, dia i David Douillet izay enjehin’ny « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » noho ny fanambaram-pananana miharo hosoka, ary efa am-pelatanan’ny Fitsarana ny volana Janoary 2018. Manan-draharaha eny amin’ny Fitsarana, mbola raharaha maloto hatrany koa i Jean-François Mancel, isan’ireo nandray anjara fitenenana tamin’ilay IEM tany Frantsa.
Manoloana ireo resaka mandeha sy niniana novoizina mafy, teo aloha teo, fa hanitatra ny fe-potoam-piasany ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, novaliany ampahibemaso nanoloana ny Vondrona Eoropeanina sy ny mpikambana eo anivon’ny governemanta ary ny mpanao gazety ...Tohiny